အားလုံးဘရာဇီး - သင်မြင်နိုင်သမျှပြုပါ Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဘရာဇီးသည်တောင်အမေရိကရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုရွေးနုတ်ရှင်ဖြစ်သောရီယိုဒီဂျနေးရိုးကိုလက်လွတ်။ မရပါ၊ အစဉ်အလာကိုလှပသောရှုခင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သည့်လှပသောမြို့ကြီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Sao Paulo သည်စီးပွားရေးစင်တာနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Catedral da Séသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းစသည့်အခြားသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်အတူအပန်းဖြေမှုကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။
၎င်း၏မြို့တော် Brasilia သည်ပန်းခြံများနှင့်ပြည့်နှက်လျက်၎င်း၏ Metropolitan ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ် Plaza de los Tres Poderes လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဟုတ်တာပေါ့၊ တကယ်လို့မင်းကမင်းဟာမင်းကိုသဘာဝထက်ပိုတယ်ဆိုရင် Iguazu Falls ကိုမင်းလွမ်းလိမ့်မယ်။ Galian de Maragogi တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရမည့်သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်Florianópolisသို့မဟုတ် Lopes Mendes နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောကမ်းခြေ (သို့) သဘာဝရေကန်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သောကမ်းခြေဒေသများအပြင်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအခြားနေရာများမှာရေနှင့်သဲကန္တာရတို့တည်ရှိနေသည့် Lenoois Mahrenenses (သို့) Ouro Preto ၏မြို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနေသောလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်နောက်ပြန်ခရီးသွားခြင်းကိုပျော်ရွှင်စေသည်။ ဂျာမန်ရိုးရာများရောက်ရှိလာပုံရသည့်အံ့မခန်းဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောနှောမှုရှိသည့်ဂရာမိုဒိုကိုမမေ့ပါနှင့်
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
ဘရာဇီးတွင်အလွန်ရိုးရာသောက်စရာများနှင့်ကော့တေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ capeta ဖြစ်ပါတယ် ...
Triple Border - အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီးနှင့်ပါရာဂွေးတို့ကိုသိကျွမ်းပါ
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
trifinium သည်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ချင်းတိုက်ဆိုင်သည့်ပထဝီအနေအထားဖြစ်သည်။ အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာ ...
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ညတွင်ကျင်းပသောဟယ်လိုဝိန်းပွဲသည်အင်္ဂလိပ် - ဆာဆွန်နိုင်ငံအချို့တွင်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသည်။
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၈၀ ခန့်တွင်လူ ဦး ရေ ၆ ခုမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ၏ 8 အက
por Alberto ခြေထောက်များ လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခု
por Alberto ခြေထောက်များ လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
မြို့ပြအနုပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှအဆောက်အ ဦး များ၊ မြင်းကျားကူးခြင်းနှင့်လှေကားတောင်မှမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။
လက်တင်အမေရိက၏ 8 ရောင်စုံမြို့ကြီးများ
သင်၏ဘဝ၌တစ်ချိန်ကမြင်တွေ့ရမည့်တောင်အမေရိကရှိ ၁၀ နေရာ